February 8, 2021 - ApannPyay Media
February 8, 2021 by ApannPyay Media
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး သင့်ရှယ်ရာတစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး တစ်နေ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော အမတစ်ယောက်မှ … … မောင်လေးစိုင်းမင်းသန့်မင်းကတိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေတင်နေတာမို့ အမတို့မိသားစု လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးပြောပြပါ့မယ် … ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အများအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့အမ ကုသိုလ်ရတာမို့ ပြောပြပါခင်ဗျာ … အမရဲ့ အဖေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နေတာပါ အမက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်တယ် ။ အာ့နဲ့ ပင်စိမ်းပင်နဲ့ရောဂါ ( 40 ) ဖတ်မိပြီး ပင်စိမ်းပင် ကလည်း အရံသင့်ရှိတာနဲ့ လက်တွေ့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြု လိုက်တာ ပုံထဲကအတိုင်းပဲ အမရဲ့ အဖေရောဂါစဖြစ်တော့ အသက် ၆၇ – ၆၈အရွယ် လူကပိန်ပြီး ရင်ဘတ်ကအောင့် လူကနည်းနည်းလှုပ်လည်းမောတယ် ။ ပင်စိမ်းပင်ဆေးသုံးစွဲပြီး နှစ်လအကြာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ အရင်လို ရင်ဘတ်အောင့်တာ မောတာတွေ မရှိတော့ဘူးစားကောင်းအိပ်ကောင်းနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်း … Read more
ကောင်လေးတွေ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၆) မျိုး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မှ စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လူ့သဘာဝအရ စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အနေနီးရင် ချစ်မိသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ကောင်လေးတွေက ကိုယ့်ကို ကြိုက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသလို ကောင်မလေးတွေကလည်း ကောင်လေးတွေ ကိုယ့်ကို ကြိုက်အောင် လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ စနှိုက်ကြော်တွေလည်း ပေါများလာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုလေးတွေက ကောင်လေးတွေဆီက စိတ်ဝင်စားမှုကို ရသွားစေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ အကြည့်ချင်းဆုံတာ အကြည့်ချင်းဆုံရင် ရင်ခုန်သည်လို့တောင် ဆိုစကားတွေ ရှိထားပါတယ်။ တကယ်လည်း ချစ်မှုရေးရာမှာ အကြည့်တစ်ချက်ကလည်း အရေးပါနေပါတယ်။ ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါနေတဲ့ မျက်လုံးမျိုးကို ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ မခံနိုင်ကြပါဘူး။ အမြဲလိုလို သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ … Read more
ပြည်သူတွေကို ပြည်သူ့ဆရာဝန်တွေ အခမဲ့ကုပေးပြီ
ပြည်သူတွေကို ပြည်သူ့ဆရာဝန်တွေ အခမဲ့ကုပေးပြီ ဒီချိန်ကြီး (ည၁၁နာရီ) အိမ်ဘေးက အကိုတယောက် နေမကောင်း ဖြစ်လို့ ဘယ်ဆေးခန်းမှ လည်းပြေးမရ၊ ဆေးရုံ ကလည်း အခြေအနေ ဘာမှန်းမသိတာနဲ့ အမေကတဆင့် ဌ/ရပ်ကွက်၊ ဂန္ဓမာ group က ဆရာဝန်တွေဆီ အကူအညီ လိုရင် တောင်းလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ post တွေ့လို့ အဆက်အသွယ်ရပြီး ဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီတောင်းလိုက်တာ၊ ချက်ချင်းကို လူနာအိမ်ရှေ့ထိရောက်လာပြီး ကုပေးသွားတယ်။ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။ ဆေးဖိုးလည်း တပြားမှ မယူသလို အလှူငွေထည့်ဖို့ လုပ်တော့လည်း သူတို့လက်မခံလို့ ရုံးမှာပဲ အလှူငွေလာလှူခိုင်းပါတယ်။ အချိန်မရွေး လှမ်းခေါ်ပြီး အကူအညီတောင်းနိုင် ပါတယ်တဲ့ ကျေးဇူးအခါခါတင်မိပါတယ်။ ခရက်ဒစ် – Thet Thet Yadanar Thein။ … Read more
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အမှန်တရား ဖတ်ကြည့်နော် ကျွန်တော်တို့ ဆေးလိပ်မသောက်ပဲအသက်ရှင် ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တယ်။ ဒါတောင်မှပဲဆေးလိပ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ကုဋေကြွယ်သူဌေးတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရက်မသောက်ပဲအသက်ရှင်ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တယ်။ ဒါတောင်မှပဲအရက်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ကုဋေကြွယ်သူဌေးတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုလဲအသက်ရှင် ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တယ်။ ဒါတောင်မှပဲဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ကုဋေကြွယ်သူဌေးတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့…သိပ်ပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အမှန်တရားကတော့အစားအစာ အသီးအနှံတွေ မရှိပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင် နေထိုင် ရှင်သန်လို့ မရဘူး။ ဒါတောင်မှပဲသီးနှံ အစားအစာတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဟာခုထိဆင်းရဲမွဲတေနေကြတုန်းပါပဲ။ Credit-Original writer ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့အမွန္တရား ဖတ္ၾကည့္ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆးလိပ္မေသာက္ပဲအသက္ရွင္ ရွင္သန္ ေနထိုင္နိုင္တယ္။ ဒါေတာင္မွပဲေဆးလိပ္ထုတ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကုေဋႂကြယ္သူေဌးေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရက္မေသာက္ပဲအသက္ရွင္ရွင္သန္ ေနထိုင္နိုင္တယ္။ ဒါေတာင္မွပဲအရက္ထုတ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကုေဋႂကြယ္သူေဌးေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းအသုံးမျပဳလဲအသက္ရွင္ ရွင္သန္ ေနထိုင္နိုင္တယ္။ ဒါေတာင္မွပဲဖုန္းထုတ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကုေဋႂကြယ္သူေဌးေတြ … Read more
ထမင်းမစားရသေးလို့ကျွေးပါအုန်းဟုပြောရာ ဗိုလ်ချုပ်မှန်းမသိဘဲ အိမ်သို့ခေါ်ကာ ထမင်းကျွေးခွင့်ရခဲ့သူ
ထမင်းမစားရသေးလို့ကျွေးပါအုန်းဟုပြောရာ ဗိုလ်ချုပ်မှန်းမသိဘဲ အိမ်သို့ခေါ်ကာ ထမင်းကျွေးခွင့်ရခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ ထမင်းမစားရသေးလို့ကျွေးပါအုန်းဟုပြောရာ ဗိုလ်ချုပ် မှန်းမသိဘဲ အိမ်သို့ခေါ်ကာ ထမင်း ကျွေးခွင့်ရခဲ့သူ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိသလို သမိုင်းမှာ ပါဝင်ခွင့် မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လည်း ရှိနေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်ကို တော်လှန်ဖို့ လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားစဉ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျုံပျော်မြို့နယ် ရှားခဲကျေးရွာကို ဗိုလ်ချုပ် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထမင်း မစားရသေးလို့ အရုဏ်တက်ချိန် အလှူတခုမှာ ဝင်ရောက် တောင်းခံရာ အရုဏ် ဆွမ်းလောင်းဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အလှူရှင်မိသားစုက ဗိုလ်ချုပ်မှန်း မသိဘဲ ထမင်းချိုးနဲ့ ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှန်း မသိခဲ့ဘဲ ထမင်းချိုး … Read more
လူ၅ဦးထက်ပိုမစုရ၊ ညမထွက်ရ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ညမထွက်ရ၊ လူ (၅) ဦးနဲ့အထက် မစုဝေးရ။ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်။ မန္တလေးမှာ လူ (၅) ဦးနဲ့အထက် မစုဝေးရန်နဲ့ ည ၈ နာရီကနေ မနက် ၄ နာရီအထိ မထွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ကနေ အမိန့်ထုတ်ပြန်တာတွေ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အများပြည်သူရဲ့ လုံခြုံရေး နဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်စေရန် စိုးရိမ်ရတဲ့ အပြုအမူတွေတွေ့ရှိရပြီး လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နဲ့ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးကို ဖြစ်စေနိုင်လို့ ယူဆရတဲ့အတွက် စုဝေးဟောပြောတာ၊ စီတန်းလှည့်လည် တာတွေ မလုပ်ဖို့ကိုလည်း တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့တွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရအမိန့်နှင့် လူ … Read more
ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေကို အရေးယူမည်လို့ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှ သတိပေးလာ
အမေစုရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို ဆရာ စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပြီ။
အမေစုရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို ဆရာ စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပြီ အကြောင်းအရာကတော့ ၈ရက်နေ့ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် ၉ရက်နေ့မှာ အရာရာသတိနဲ့ယှဉ်ရတော့မယ်။ ၁ဝရက်နေ့မှာ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးသွားပူးမယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ ဂြိိုလ်ခြောက်လုံးပူးမယ်။ အဲ့ဒီချိန်မှာ အင်တိုက်အားတိုက် သုံးရက်ရှိတယ်။ ၁ဝရက် ၁၁ရက် ၁၂ ရက် အဲ့ဒီရက်သုံးရက်မှာ အားအင်အပြည့်နဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အခြေအနေထူးခြားစွာ ကောင်းမွန်မယ်။…..နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဇာတာမှာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်က မူလလအနေအထားမှာ အင်မတန်အားကောင်းပြီးတော့ အခြေအနေမြင့်မားစွာတည်ရှိနေတဲ့သဘာဝ ပိိုင်ဆိုင်ထားတယ် ။ ဇန်နဝါရီ ၃၁ကစပြီးတော့ အမေစုပေါ်မှာ မတရားတိုက်ခိုုက်ပြီး အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အနေအထားကိုရောက်တာ။…. ၂၁ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီမှာ အတည့်ပြန်သွားမှာ။ အဲ့ကျရင် အမေစုရဲ့ကံကြမ္မာကို ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရပဲ အတည့်ပြန်သွားမယ်။ ဒီအနေအထားမှာ အားလုံးက ကောင်းသောဆုတောင်းခြင်းကို … Read more
The Lady ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မီရှဲလ်ယိုက မြန်မာနဲ့အတူ ရပ်တည်
The Lady ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မီရှဲလ်ယိုက မြန်မာနဲ့အတူ ရပ်တည် ဂုဏ်ယူစွာ ရှဲပေးသင့်တဲ့ပို့ဆိုတာ ဒါမျိုး The Lady ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မီရှဲလ်ယိုက မြန်မာနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်းပြော စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းနေစဉ်အတောအတွင်း ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကို ရဲဝံ့စွာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းရိုတ်ကူးထားတဲ့ The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ The Lady ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မီရှဲလ်ယိုက မြန်မာနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်းသူမရဲ့ Ig စာမျက်နှာမှာဝန်းရံပေးခဲ့ပါတယ်။ Credit The Lady ဇာတ္ကားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မီရွဲလ္ယိုက ျမန္မာနဲ႔အတူ ရပ္တည္ ဂုဏ္ယူစြာ ရွဲေပးသင့္တဲ့ပို႔ဆိုတာ ဒါမ်ိဳး The Lady ဇာတ္ကားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ … Read more
အစာကြေလွယ်စေဖို့အတွက် အချက်6ချက်
အစာကြေလွယ်စေဖို့အတွက် အချက်6ချက် 1. အပင်ကရတဲ့ အစားအစာတွေကိုစားပါ။ အပင်ကရတဲ့အစားအစာတွေမှာအမျှင်ဓာတ်ပါဝင်ပြီး အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကို ပုံမှန်အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်ရင် အပင်ကရတဲ့အစားအစာတွေစားပါ။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ အခွံမာသီးများနှင့် အစေ့များ၊ ပြုပြင်မထားသော ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ပဲနှင့်ပဲတောင့်ရှည် စတာတွေစားပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းစစားပါ။ ပုံမှန်စားနေကျအစာထဲကို အမျှင်ဓာတ်တဖြည်းဖြည်းထည့်စားလာသလို ရေလည်းတိုးသောက်ပါ။ ရေကအမျှင်ဓာတ်တွေရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေကြောင့် အမျှင်တွေကိုစိုစွတ်သွားစေပြီးလေထခြင်း၊ ဗိုက်ရစ်ခြင်းတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 2. အရည်များများသောက်ပါ။ ရေနဲ့အခြားအရေတွေဖြစ်တဲ့ စွပ်ပြုတ်၊ ဟင်းချို၊ ချဉ်ရည်နဲ့ ဖျော်ရည်တွေက ကျွနု်ပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ စနစ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဆေးဘက်ဝင်လက်ဖက်ရည် (သို့) ရေနဲ့ သခွားသီးတစ်ချပ်၊ သံပုရာတစ်ကွင်းထည့်ပြီးလည်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေတဲ့ အရက်ပါဝင်တဲ့အရည်တွေနဲ့ များလွန်းရင် အူကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ ကော်ဖီအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကလွဲရင် အရည်တွေများများသောက်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့် … Read more